YDB, yakavhurika sosi yakagoverwa SQL dhatabhesi | Linux Addicts
Darkcrizt | 30/04/2022 16:25 | Free Software
Kune avo vari kutsvaga byakagoverwa SQL database, nyaya yatichataura nezvayo nhasi ingakufadzai, sezvo tichataura nezvayo YDB, inova database iyo munguva pfupi yapfuura Yandex yakaburitsa kodhi yayo.
YDB yaive kugadzirwa kubva pasi zvichikwira kuri kuita kudiwa kuri kukura kwemashandisirwo ewebhu masevhisi scalable. Scalability, kunyatsoenderana, uye kutengeserana kwakanaka pakati pezvikamu zvaive zvakakosha kune OLTP-yakafanana nebasa rekuita.
YDB inovakwa nevanhu vane hwaro hwakasimba mudhatabhesi uye masisitimu akagoverwa, vakagadzira dhatabhesi reNo-SQL uye Mepu-Reduce system yeimwe yeinjini huru dzepasirese dzekutsvaga.
Pasi perezinesi reApache 2.0, YDB inomhanya pa86-bit x64 mapuratifomu ane hushoma hwe8 GB ye RAM.
"Tine ruzivo rwakakura rwekumhanyisa masisitimu ekugadzira pa x86 64-bit michina inoshandisa Ubuntu Linux. Takaona kuti dhizaini inoshanduka yeYDB inotitendera kuti tivake mamwe masevhisi pamusoro payo, kusanganisira mitsetse inoramba iripo uye madhizaini ekuvharisa,” rinodaro boka rebudiriro.
"Nezvinangwa zvekusimudzira, tinogara tichiona kuti dhatabhesi reYDB rinogona kuvakwa uye kushanda pane zvichangoburwa shanduro dzeMacOS neMicrosoft Windows. »
YDB inogona kuiswa munzvimbo nhatu dzekuwanikwa Zone. Iyo cluster inoramba ichiverengeka uye kunyorwa panguva yekutadza kuzere kwenzvimbo imwe chete. An Availability Zone inzvimbo yakasarudzika yedata kana chikamu chayo chine chinhambwe chidiki chemuviri pakati pemanodhi uye njodzi shoma yekutadza pamwe chete nedzimwe Nzvimbo Dzinowanika.
Nzvimbo yakakura yenzvimbo inzvimbo iyo chinhambwe chiri pakati peAvailability Zone chiri 500 km kana pasi. Chisumbu cheYDB chakagovaniswa chine node dziri munzvimbo dzakasiyana dzeKuwanikwa mukati medunhu rakakura. YDB inoita synchronous data inonyora kune imwe neimwe yeAvailability Zone, ichiva nechokwadi chekusakanganiswa kuita muchiitiko chekutadza kweAvailability Zone.
Mumapoka akagovaniswa nenzvimbo, zvinokwanisika kusarudza mutemo wekugovera computing resources pakati pe data centers. Izvi zvinokutendera kuti urove chiyero chakakodzera pakati penguva shoma yekukwira uye shoma yekudzikisa kana data data ikatadza.
Kusiyana netsika dzehukama dhatabhesi, YDB ine scalable, zvichibvumira vanogadzira kuti vangowedzera sumbu nekombuta kana zviwanikwa zvekuchengetedza kuti zvibate nekuwedzerwa mutoro. YDB ine zvikamu zvakapatsanurwa zvekombuta nekuchengetedza izvo zvinobvumira komputa uye zviwanikwa zvekuchengetedza kuyera zvakazvimiririra.
Zvivakwa zvekugadzira zvazvino zvine manode anopfuura zviuru gumi, chengetedza petabytes yedata, uye inobata mamirioni ekutengeserana akagoverwa pasekondi.
Iyo kukwanisa kugadzira zvigadziriso zvinoshivirira kukanganisa iyo inoramba ichishanda kana dhisiki, node, racks, uye kunyange nzvimbo dze data dzega dzakundikana. YDB inotsigira kuchinjika kuendesa uye kudzokorora munzvimbo nhatu dzekuwanikwa uchichengetedza mamiriro eboka kana paine kutadza kweimwe yenzvimbo.
Uye izvozvo zvakare data kuwana rutsigiro uchishandisa scan queries, yakagadzirirwa kuita ad-hoc analytical mibvunzo pane dhatabhesi, inoitwa mukuverenga-chete modhi uye kudzoreredza grpc rukova.
Uye zvakare, inotsigira serverless uye akawanda-maroja masisitimu. Mushandisi anogona kushandisa sumbu reYDB uye kugadzira akawanda dhatabhesi anogovera dziva rekuchengetedza uye ane akasiyana compute node. Mushandisi anogona zvakare kumhanya akawanda serverless dhatabhesi anogovera dziva remakomputa zviwanikwa kuti uzvishandise nemazvo.
YDB inosanganisa kusimba kwakasimba, ACID transactions, yakakwirira-performance mibvunzo, kukurumidza kutora data neyakajairwa SQL dialect, uye JSON API rutsigiro. Inoshanda nezvose zvemazuva ano mabasa: kiyi-kukosha, hukama, JSON.
Chekupedzisira, kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo, unogona kubvunza iwo maficha mu inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » YDB, yakavhurika sosi yakagoverwa SQL dhatabhesi